Ukuza aphume esikhungweni ukuqina, "UMarku Avrely", amakhasimende bazithola omuhle karate emhlabeni, ukuqina nokudansa. Lapha, kwakha isimo esihle, itholakala ku umsebenzi elikhiqizayo.
Ochwepheshe abasebenza kulesi sikhungo, kuyosisiza sithole choice of izinhlelo anikeze iseluleko eziwusizo futhi uthole indlela ukuze isivakashi ngasinye. Abasebenzi abaqeqeshi abaqeqeshiwe ukufundisa amakilasi, ukuqeqeshwa isisindo, ezihlukahlukene izinhlelo umdanso, nokunye okuningi, yizona ukuziqhenya isikhungo.
Iminyaka engamashumi amabili adlule kwakungekho inethiwekhi wokuqala labasubathi, esemgwaqweni esitezi ivulekile ehhotela eziyinkimbinkimbi Izmailovo Highway 71D yesibili.
I club lucwaningo umsebenzi walo nsukuzonke, ngaphandle kokuthatha ikhefu futhi ngezimpelasonto-7 ekuseni kuya ku-11 ntambama.
Isingeniso okuhle club
Indawo yokudlela kwenza abantu babe nombono omuhle kakade emnyango - endaweni okufikela kuyo izingcingo kuyinto ocebile, zemabula ezitebhisini, ezindongeni izithombe abasubathi abadumile ngekudvumisa Autographs.
"UMarku Avrely" (Izmailovo) - endaweni ukufaneleka, okuyinto ngokushesha abangele ukuwa. Kukhona namakamelo abanzi futhi ukhululekile imishini yesimanje kanye ergonomic imishini ukuqeqeshwa, ukuqina isikhala, lapho zonke izimo ngoba ukuqeqeshwa. Insimu club ithatha square metres phezu 1600. Isebenzisa uhlelo coaching abasebenzi abanolwazi, abafundisi bayajabula ukwabelana nawe okuhlangenwe nakho okulusizo. Ngaphezu umsebenzi ngokomzimba, inikeza - solarium, massage, ubuhle isikhungo nesigaxa ukuqina. Futhi e club ezemidlalo izingane ', ungathola izeluleko umsoco futhi sidlule ukuqina ukuhlolwa.
Yini amasevisi walungiselela ukunikela "UMarku Avrely" kumakhasimende ayo
Sizama ukuchaza amasevisi ethandwa kakhudlwana anikelwe isikhungo, "UMarku Avrely" (Izmailovo):
ezihlukahlukene isiqondiso aerobic;
ukudansa kimi; +
ukuqina kwabesifazane abakhulelwe ;
yoga, Pilates, Callanetics, elula;
ngezikhathi ezithile futhi okubhaliselwe ukuvakashelwa.
Qaphela ukuthi uhlu akuphelele, ukuze uthole olunye ulwazi, sincoma ushayele inombolo enikeziwe kwi-website esemthethweni inkampani.
Njengoba isevisi ezengeziwe emva ezemidlalo "UMarku Avrely" (Izmailovo) inikeza sauna, a spa, massage, noma solarium.
Salon ubuhle inikeza uhla egcwele emakhosazaneni enhle amasevisi izinga:
ukunakekelwa kwamazipho, izinwele, umzimba nobuso;
ukuzimonyonga ukulungisa izinzipho zezandla nezezinyawo;
massage umzimba - ke indlela engokwemvelo ephulukisa emzimbeni futhi enye yezindlela ezingcono kakhulu ukuqinisa zokuziphilisa amabutho. Massage kuyasiza ezakha izinqubo umzimba emzimbeni, ngcono ukusebenza zonke izinhlelo zalo, elikhishiwe kwezinye izinguqulo ukugeleza lymph.
Abantu abakhetha massage njengoba Physiotherapy, ukuvikela umzimba ekulweni nezifo, ukudala ajabule, ukwandisa ukusebenza kahle. Yezemidlalo, okuyinto okuxoxwe ngazo kulesi sihloko, kukhona masseurs afanelekayo oluphethe amasu ahlukahlukene massage:
Ngemva izifundo eziningana isikhumba sakho siba bushelelezi futhi Velvety.
Kuyo yonke ngonyaka khona "ucezu ilanga" amakhasimende kule club zezempilo. It unikeza - solarium mpo kanye esitolo enikeza amathuluzi anhlobonhlobo ngokuthuthukisa umbala tan, okuyinto Awugcini nje umphumela, kodwa futhi vitaminize futhi sivikeleke.
Uma ufuna ukuthola umzimba omncane nemisipha nokunwebeka, ekhokhela akusiyo imali emba eqolo, khona-ke nakanjani njengoba inketho ukuzicabangela "UMarku Avrely" (Izmailovo). Amanani e-okuhle club ekhangayo futhi kungashiwo ezingabizi:
- ukubhaliswa ngenyanga izobiza ruble 4000;
- ikhadi izinyanga eziyisithupha - 15 000;
- ekubhaliseni konyaka kubiza ruble angaba yizinkulungwane 23;
- ithikithi isizini izingane - hhayi ningi than 4.5 ayizinkulungwane;
- yesikhathi esisodwa ukuvakashelwa - ruble 1500;
- siqu ukuqeqeshwa - ruble 2000.
Club amukela kokubili imali kanye credit cards.
Ukuthi amakhasimende cabanga club
Kuyi-Internet ungathola omningi impendulo isimiso esiyinkimbinkimbi "UMarku Avrely" (Izmailovo). Iningi Izibuyekezo omuhle, kodwa futhi kukhona nalabo lapho izivakashi club belulekwa ukuba ushintshe okuthile. Ngokwesibonelo, amakhasimende amaningi akudingeki pool ngokwanele, njengoba kuyoba mnandi emva Amazing ukubhukuda kamatima kanye uphumule, abanye bakholelwa ukuthi izakhiwo, ikakhulukazi ngigeza futhi eydijithali amakamelo, sekuyisikhathi bazilungisele umshini. Esikhathini amahholo sintula ngokucacile cooler amanzi ngalo Izibuyekezo zabo basho amakhasimende amaningi.
Phakathi izinzuzo izivakashi eziyinkimbinkimbi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana wobungane omuhle, unake coaching abasebenzi, abasebenzi nomusa. Ibanga oda nokuhlanzeka, futhi okubaluleke - ke ukungabi emigqeni.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, isikhungo uyakufanelekela kakhulu, isikhala ngaphakathi ihlelwe kahle umsebenzi imvelo, bambalwa abantu, futhi inzuzo enkulu - lena nenani elikhulu izinga umsebenzi imishini. Uma ufuna ngomzimba omuhle futhi unempilo - konke Wamukelekile "UMarku Avrely" (Izmailovo).
Bheka le lesi sihloko, inombolo yocingo kanye ukwaziswa okwengeziwe ngale nhlangano zingatholakala ekhasini eliyisiqalo yeqembu.